China Inofema Pet Kutakura Bhegi Kugadzira uye Fekitori | Kinghow
Inofema Pet Kutakura Bhegi
Nhema Unisex Kutonhorera Laptop Isina Mvura Chikoro Ba ...
Tsika Yakakura Kugona Hockey Midziyo Bhegi
Yakasarudzika Dhizaina Mufashoni Mukadzi Hombodo Hombodo 500D CORDURA® Ku ...
Mucheka Bhegi Tote ne Stroller Straps
Bhegi Bhegi Bhegi Messenger Bhegi
Inotonhorera Bhegi Isina Mvura Yakasungirirwa Leak-proof
Kufamba Backpack ne USB kuchaja Port
Inotonhorera Bhegi Yakabvaruka-chiratidzo Yakasungwa Makani 30
Mauto Tactical Backpack 40L Mauto Pack
Bvisa PVC Backpack Stadium Yakagamuchirwa
Laptop Backpack yeBhizinesi Rekufamba
Yakasungirwa Kutonhorera Bhegi 32-Inogona
Imbwa yedu inotakura ndeyendege yakatenderwa uye ine padenga yemukati uye yakapfava mativi, inoita kuti mhuka dzinovaraidza dzinzwe kugadzikana uye dzakachengeteka mukati uye dzinoda kugadzikana uye kumborara.
Pet Anotakura Zvimiro
Tora chipfuwo chako zvakachengeteka neanotakura anotakura. Yakagadzirirwa kuchengetedza mhuka kuchengetedzwa, kuchengetedzeka uye kugadzikana. Anotakura chipfuyo akakodzera kufamba nendege kana mota kana kungoshanyira chiremba wemhuka uye inokodzera imbwa nekatsi dzinorema kusvika pa15lbs.
Yakasimba uye yakavimbika dhizaini:
Zvekutakura zvakachengeteka, iye anotakura akashongedzerwa nemaoko maviri anobatika kutakura mhuka uye kuchengetedza mwero.
Inosanganisirawo inogadziriswa bhanhire tambo kuitakura usingashandise maoko ako. Inogona kupetwa uye kuiswa pasi pezvigaro zvendiza; Neiyi nzira, unogona kugara uchitora chipfuwo chako usina kumbofamba wega.
Rutsigiro rwechipfuwo rune kuvhura kwedivi kubvumira mhuka kuti ipinde pasina matambudziko. Iyo zipi yakasimba inochengetedza kuvhura kwakanyatso kuvharwa panguva yekutakura.
Iyo yekufefetera mapaneru ane mweya unofema mumatanhatu mativi kwete chete simbisa yakakwana kuyerera kwemweya, asi zvakare bvumidza mhuka kuti itarise kunze.
Chimiro chechipfuwo chine chigadziko chinobviswa chinogadzira yakasimba uye yakagadzikana pamusoro pechipfuwo chako, pamwe chete neabvisirwa rug wuru.
Inopa mubhedha wakasununguka uko chipfuwo chako chinogona kurara mukati merwendo. Ndiyo sarudzo yakanaka yekufamba nezvipfuyo zvako.
Ruzivo rwekuchengetedza: Usasiye mhuka isina kutarisirwa ichiri mumutakuri. Paunenge uchifamba nemota, isa mutakuri pachigaro chekumashure.
Kuchenesa: Iyo nyoro yemvere yerugi inogona kubviswa uye kugezwa muruoko, nepo iwe uchingogona chete kuchenesa bracket uko yakasviba.
Zviyero: 41.1 * 24 * 30.7cm /16.2 * 9.45 * 12.1 inches (Ndokumbira utarise saizi uye huremu hwemhuka yako usati watenga)
Iyo pasuru inosanganisira:
Rudzi rwebhizinesi: Gadzira, Gadzira uye Export anopfuura makore gumi nemashanu
Main Zvigadzirwa: Yakakwira-magumo emhando bhegi, bhegi rekufamba uye bhegi rekunze kwemitambo ...
Vashandi: 200 Vane ruzivo vashandi, 10 mushambadzi uye 15 QC
Gore rekugadzwa: 2005-12-08
Fekitori Nzvimbo: Xiamen naGanzhou, China (Mainland); Yakazara 11500 mita mita
1. Tsvagurudza uye tenga zvese zvinopihwa uye nezvezvinhu izvo zvinodiwa neiyi bhegi chirongwa
Main Jira Ruvara
2. Cheka machira ese akasiyana, liner uye zvimwe zvinhu zvehombodo
3. Silk-screen kudhinda, Embroidery kana imwe Logo yehunyanzvi
4. Kusona yega yega prototype kuva semi-apedza zvigadzirwa, wobva waunganidza mativi ese kuti ave mugumo chigadzirwa
5. Kuona kuti mabhegi asangana nezvakatemwa, timu yedu yeQC inoongorora maitiro ese kubva kuzvinhu kusvika kumabhegi akapedzwa zvichienderana neStrict Quality System yedu
6. Zivisa mutengi kuongorora kana kutumira hombe sampuro kana kutumira sampuro kumutengi kwekupedzisira cheki.
7. Isu tinorongedza mabhegi ese sekutsanangurwa kwepakeji tobva tatumira
Pashure: Hot-kutengesa Bhegi bhegi Bhegi - Bhegi Bhegi Bhegi Messenger Bhegi - Kinghow
Zvadaro: Kufamba Kurongedza Cubes Vatakuri Vanotakura
imbwa inotakura bhegi
Backpacking Tende yeMunhu 1-2
Mens Nylon Belt 51 inch Elastic Kutambanudza
Inotonhorera Bhegi Yakasungirirwa yeKambi
Inowedzerwa Yakapfava-Sided Imbwa Inotakura
6ways Maoko Mahara Imbwa Leash